Safiirka Britain u fadhiya dalka Somaliya, Harriet Mathews, ayaa waxay maanta gaartay Magaalada Kismaayo Ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose. – STAR FM SOMALIA
Safiirka Britain u fadhiya dalka Somaliya, Harriet Mathews, ayaa waxay maanta gaartay Magaalada Kismaayo Ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Safiirka Britain u fadhiya dalka Somaliya, haweeneyda lagu magacaabo Harriet Mathews, ayaa waxay maanta gaartay Magaalada Kismaayo Ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa wefdiga Safiiradda ku qaabilay Garoonka Magaalada Kismaayo, oo kulan ay ku yeesheen.
Labada dhinac, ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha ammaanka, roobabka El Nino oo sida la sheegay Somaliya ku soo wajahan iyo hiigsiga sanadka 2016-ka, oo sida uu qorshuhu yahay ay doorasho guud ka dhacdo dalka.
Safiiradda, ayaa waxay sheegtay in Britain ay ka go’an tahay inay gacan u fidiso shacabka degan deegaanada ku teedsan Wabiga Jubba. Haddii ay noqon laheyd dadka degan Gobolada Jubbooyinka & Gedo.
Sidoo kale waxay sheegtay in Maamulka Jubbaland ay kala shaqayn doonto, sidii loo wejihi lahaa fatahaadaha la fillaayo in Wabiga Jubba uu ka gaysto Goboladaasi, marka ay da’aan roobabka El Nino.
Harriet Mathews oo sii hadleysay, ayaa sheegtay in Britain ay bixin doonto tasiilaadka ay u baahan yihiin Ciidamada Jubbaland, si ammaanka ugu xoojiyan.
Madaxweyne Axmed Madoobe, ayaa Boqortooyada Britain kaga mahadceliyay taageerada ay siinayso Jubbaland iyo gebi ahaanba dalka Somaliya.
Yuusuf Xuseen Jimcaale oo loo magacaabay Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir
Muungaab oo xilkaqaadis lagu sameeye sida ay xaqiijisay wasaarada arimaha gudaha